South American Falls, nnukwu mmiri mmiri | Akụkọ Njem
South America Falls: Nnukwu Mmiri
Maria José Roldan | | America, Argentina, Brasil, Ebe njegharị, Peru
South America bụ ebe obibi nke ọdịdị ala mara mma gbasaa na ụsọ oké osimiri, ugwu na oke ọhịa. Mmiri, akụ dị oke ọnụ ahịa taa, na-aga kọntinent ahụ site na osimiri, iyi, iyi, iyi mmiri na iyi mmiri. Kpamkpam taa anyị chọrọ ikwusa ọmarịcha mmiri mmiri mmiri dị na Latin America.
Ọ bara uru ịhazi njem gaa ala ndị a iji jiri anya gị hụ ihe dị ịtụnanya ọdịdị na-enye anyị. Ihe bụ ihe ọzọ, na South America ha maara ka ọdịda si dị ebube ma enwere ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na-ahazi njem na-ahapụ ụlọ nkwari akụ iji kwado njem ahụ na nleta ndị ahịa ha.
Ọzọ, aga m egosi gị ụfọdụ nsụda mmiri ndị a, na mgbakwunye na nke ịtụnanya, dị egwu ma na ọ bụrụ na ị hụ ka ha dị ndụ, ị gaghị enwe mmasị. Ọ ga - abụ ahụmịhe nke ga - atụgharị n'uche na ndụ gị niile n'uche gị na n'obi gị!
2 Ndị mmụọ ọjọọ akpịrị
3 The Kaieteur Falls
4 Mmụọ ozi ahụ
5 Mmiri mmiri na-acha anụnụ anụnụ
6 Waterfọdụ mmiri mmiri dị na Peru
7 Ha kwesịrị ka a hụrụ ha
Obi abụọ adịghị ya, nke kachasị ma bụrụ onye a na-ewere dị ka nke kachasị elu n'ụwa bụ Iguazú Falls. Ọdịda ndị a bụ ezigbo onyinye okike dị n'etiti Brazil na Argentina nke ọtụtụ mmadụ nwere ọchichị iji hụ ndụ, gịnị kpatara ị ga-eji ka mma? Ha kwesịrị ile anya!
Na mpaghara Misiones, kpọmkwem na akụkụ gaucho, na Iguacu National Park, na Paraná na mpaghara Rio de Janeiro. Y’oburu n’aja ileta ndị a 275 waterfalls 80 mita elu, Anyị na-akwado ka ị gaa n'oge a site na Ọktọba ruo Disemba ka ị nwee ike ịnya ụgbọ mmiri n'okpuru mmiri mmiri na-enweghị nsogbu mmiri ozuzo. Ga - eju anya na ị ga - achọ ịchekwa ego ka ị nwee ohere ịlaghachi soro ndị ị hụrụ n'anya wee nwee ike ịtụgharị uche n'ihe ịtụnanya a nke okike.
Ndị mmụọ ọjọọ akpịrị
Mmiri mmiri na-adọrọ adọrọ bụ akpịrị Ekwensu. N'ihu nnukwu mmiri mmiri a, enwere akwa mmiri nlegharị anya ebe ndị njem nleta na-ejikarị ohere were foto ha kachasị ese foto.
Ọ bụghịkwa ihe ijuanya, na teknụzụ ọhụrụ na ekwentị mkpanaaka na igwefoto nwere ike ịmị mmiri n'emebighị ma ọ bụ mebie, ọ bara uru ijide foto dị egwu dị egwu nke ga-emecha ịchọrọ ịtụgharị ya na kwaaji ma nwee ọ andụ n'ụlọ gị. Onye na-enweghị mmasị n'echiche nke icheta njem dị egwu na njiri onwe onye dị egwu?
Ka anyi gbanwe mpaghara ala ma gaa Guyana. Otu n'ime ebe kachasị njem nleta na mpaghara a bụ ọmarịcha Kaieteur Falls, nke a na-atụle ọtụtụ dị ka otu n'ime ndị kasị dị ịrịba ama na ụwa maka ya 226 mita elu free ọdịda. Pụrụ iche n’otú ha hà n’ogologo? Naanị ị ga-eji ha tụnyere Niagara Falls ịmara na ha dị okpukpu 5 karịa… …hụ na ha dị ndụ bụ ezigbo ngosi mmiri, ifufe na ihe ebube!
Mmụọ ozi ahụ
Site na Guyana anyị ga-aga mpaghara dị nso, na Venezuela, ọkachasị na Canaima National Park iji mata onye kachasị ihe okike: The Angel Falls na mita 979 dị elu, yabụ mmiri kachasị elu n'ụwa. Aha ahụ na-enye anyị ntakịrị nkọwa banyere otu ụdị nsụda mmiri a kwesịrị ịdị, na otu ọ ga-esi dị egwu. Ọ dị oke mma na ọ ga-ewe nnukwu igwefoto na ọtụtụ ụzọ iji nwee ike iweghara ịdị ukwuu ya.
Mmiri mmiri na-acha anụnụ anụnụ
N’Ecuador, anyị rutere Shishink Nature Reserve na Blue Waterfall ya. Agbanyeghi na odighi itinye ya na nha (elu 25 mita), o ka kwesiri ileta iji hu oke mma ya. Nye kwuru na obere nsụda mmiri enweghị ike jupụta n'ịma mma? Ma ọ bụ na ebube nke okike anaghị aghọta nha, ọ na-enye anyị ohere ịtụgharị uche na ịma mma ya.
Waterfọdụ mmiri mmiri dị na Peru
Ọ bụrụ na ị gaa Peru, ị kwesịrị ịnọ otu ụbọchị karịa na njem gị iji hụ nsụda mmiri nke ugwu dị ka Velo de Ángel ya na 28 mita nke ọdịda efu, Enchanted Siren na ya 70 mita dị elu ma ọ bụ San Miguel Waterfall ya na 100 mita dị elu. Agbanyeghị, nke kachasị pụta n’ugwu bụ Parijaro Waterfall nke dị narị mita abụọ na iri ise n’ịdị elu, nke dị n’Ogige Ntụrụndụ Otishi.
N’akụkụ ọhịa anyị na-ahụ nsụda mmiri dịka mmiri ịchị ọchị na nke kristal nke Ahuashiyacu, Velo de la Novia Waterfall, ma ọ bụ Tirol Waterfalls. Coastsọ mmiri dị na Peruvian adịghị nso na-egosi anyị oke ebube ya na 20 mita dị elu Pala Cala Waterfall.
Ha kwesịrị ka a hụrụ ha
Ma ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịhụ ọmarịcha ihe ngosi dị otu a, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ ịchọ ogologo oge ezumike iji nwee ọmarịcha ụzọ nsụda mmiri dị mma, mana n'ezie ... nke a ga-apụta na mgbakwunye ịnwe ọtụtụ oge, Ikwesiri inwe ezigbo ego iji nwee ike ịkwụ ụgwọ ụlọ, njem site n'otu ebe ruo ebe ọzọ, nri ... ma ọ bụrụ Si Spain si njem, ị ga-enwerịrị ezigbo ego echekwara n'ihi na njem ụgbọ elu anaghị adịkarị ọnụ ala.
Mana ozugbo ị kpebiri ime njem gị, ị nwere ebe obibi ma ọ bụ ụzọ ị ga-esi kwenye na ị na-eche na ntakịrị oge ụbọchị njem gị na-eru nso ... n'enweghị obi abụọ ọ bụla na ị ga-amalite inwe akwara nke njem dị mkpa dị otú ahụ, ịmara ebe dị egwu dịka nsụda mmiri nke ụdị a.
Ọzọkwa, otu ndụmọdụ m na-enye gị (dịka m kwuru na mmalite nke isiokwu a) bụ na ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ihe ịtụnanya ndị a nke okike na-enye gị, mee ya na njem a haziri ahazi site na ụlọ ọrụ ọkachamara na ụdị nleta a. Echiche ọzọ ịmara ebe ndị a bụ isoro ndị ị hụrụ n'anya. Iso ndi ezinulo gi na ndi enyi gi ajouri ihe n’egosi bu ihe nlere anya nke gha adi ndu dika echefughi echefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Argentina » South America Falls: Nnukwu Mmiri
Daalụ. N'ihi ozi gị na-adọrọ mmasị, a hapụghị Peru n'azụ, ọ nweghị ọtụtụ nnukwu mmiri na mmiri -
Peru ị dị ukwuu!
Na Peru, otu n’ime nsụda mmiri nke na-ekpori nnukwu ogologo bụ Gocta Waterfall, ya na ihe dịka 771 n ’elu, a na-ewere ya ugbu a dịka otu n’ime ise kachasị elu n’ụwa.
Ọzọkwa, ọnọdụ ya n'etiti oke ọhịa Amazon na-eme ka ọ bụrụ ihe ịtụnanya nke okike kwesịrị ka ndị niile na-eleta ya mara ma lekọta ya.
Okirikiri aja aja asatọ kachasị dị egwu